Ny filoha Bingu ve no “Mosesy”-n’i Malawi? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2019 4:20 GMT
Mamaky ny fotoana ny mpanakanto sasany ary mametraka paikady mifanaraka amin'izany. Mahatonga ireo Malaoita marobe hihira ilay hira malazan'i Joseph Nkasa mitondra ny lohateny hoe Mose wa Lero, na dia tsy te-hihira izany aza izy ireo, noho ny fomba nampifandraisan'ilay mpanakanto an'i Mosesy anaty baiboky ny filohan'i Malawi, Bingu wa Mutharika. Ao amin'ilay hira izay hita ao amin'ny bilaogin'i Mutharika, milaza ilay mpanakanto Nkasa fa nitarika ny Malaoita hiala an'i Ejypta i Mutharika, satria noana sy nanana olana samihafa tao izy ireo. Nampian'ilay mpanakanto koa fa tsy te hiverina any Ejypta ireo Malaoita, tahaka ny nataon'ny Israeliana ihany, izay milaza am-piesoesoana ny filoha teo aloha Bakili Muluzi, izay nanambara ny fikasany hirotsaka hofidiana filoham-pirenena amin'ny taona 2009 ao Malawi. Mitondra ny anarana Mose wa Lero (Moïse maoderina) ankehitriny ny filoha amin'ny hetsika fanentanana rehetra.
Raha teo amin'ny politika, vao haingana ny filohan'i Malawi no nanao fanavaozana ny kabinetra izay nahitana ny fialan'ny minisitry ny fahasalamana, Marjorie Ngaunje namela ny lalana ho an'i Khumbo Kachale. Araka ny mety ho hitanao, noho ny fitovian'ny anarana, dia mora ho an'ilay mpitsabo tokana momba ny maso Dr Khumbo Kalua no ho voafitaka fa izy no nahazo ny asa ambony indrindra tao amin'ny minisiteran'ny fahasalamana indrindra fa nahazo hafatra sms momba ny fanendrena izy. Nobilaogiany ny tsy nahazoany ny fidanadanana ho lasa minisitry ny kabinetra manan-kaja:
Samihafa ny fanehoan-kevitra tamin'ny hafatra. Voalohany indrindra, nahoana ilay mpampiasa lehibe no tsy nifandray tamiko/na niresakz tamiko talohan'ny nifidianana ahy? ary raha marina izany, inona no mety hitranga amin'ny asako ho an'ny fiarahamonina amin'ny maha mpitsabo maso?
Nijery ireo antony mety niheverana ahy amin'ilay asa aho ary toa betsaka izy ireo; Niasa tamin'ny Minisiteran'ny fahasalamana aho ary manana traikefa efa 12 taona amin'ny maha dokotera; dokotera manam-pahaizana (aho), ary angamba mety mahafeno fepetra. Ireo antony tsy naha-vaofidy ahy dia noho izaho tsy mpanao politika, tsy mpanohana na iza na iza fa manaja ny etikan'ny asako aho ary manana olana amin'ny fanarahana ny fombafomban'asa birao minisiterialy. Amin'ny ankapobeny dia noheveriko fa ho fotoana tsara ho ahy ny ho minisitry ny fahasalamana; (mahazo) karama ambony tarehimarika enina, mahazo Mercedes Benz miaraka amin'ny mpamily, milalao ao amin'ny parlemanta ….. Nisaotra izay (na iza na iza) nanolotra ny anarako tamin'ilay mpanendry aho. Eny, vonona hanafoana ny sidina aho ary hiverina any Blantyre Malawi ary amin'ity indray mitoraka ity dia tapakila sokajy fandraharahana. Taorian'ny asa mafy nandritra ny taona maro, dia toa niova indray alina ny fiainako.
Ireo fanambin'ny oniversite Afrikanina
Malaoita mianatra any Bostwana, Benett Kankuzi mitaraina momba ireo olana atrehan'ny mpikaroka any Afrika. Tamin'ny lahatsorany mitondra ny lohateny hoe Ny fanamby amin'ny fanaovana fikarohana akademika any Afrika, itarainany ny tsy fahampian'ny fanohanana avy amin'ny governemanta izay manome fanampiana ara-bola tsy araka ny tokony ho izy. Nilaza izy fa amin'ny maha mpikaroka mitsidika firenen-kafa, dia tsy afaka miantehitra amin'ny tompon-trano mba hikarakara azy izy.
satria mazava ho azy fa tsy manam-bola ho an'ireo fandaniana ireo ny andrim-panjakana mpampiantrano. Izany dia noho ny ankamaroan'ny oniversite any Afrika vatsian'ny governemantany vola ary azo antoka fa tsy mba ampy izany vola izany. Eny tokoa, azo takarina izany satria manana “laharam-pahamehana ao anatin'ny laharam-pahamehana” amin'ny tetibolam-panjakana ny governemanta. Tsy maintsy miady ho an'ny fiarovana ara-tsakafon'ny firenena, rano madio, fampivoarana ny fotodrafitrasa sns ho an'ny vahoaka ny governemanta ary tsy ho anisan'ny lisitry ny laharam-pahamehana ny famatsiam-bola ho an'ny fikarohana akademika.
Na izany aza, mety hitarika ny hafa hanatsoaka hevitra ity toe-javatra ity fa tsy misy fikarohana akademika atao aty Afrika izay tsy voatery ho marina. Indrisy anefa fa tafiditra anaty fanaovana kaonty amin'ny laharan'ireo oniversite manerantany ny famoahana voka-pikarohana. Noho izany dia tsy mahagaga anao ny mahita anjerimanontolo afrikana maro tsy dia tsara loatra amin'ny laharana!
Amin'ny fitarafana ireo bilaogin'ny Malaoita efa ho dimampolo, dia toa maro no tsy nanoratra tato anatin'ny herinandro vitsivitsy saingy feno resaka politika anatiny, any Kenya sy fanentanana ao Etazonia ifaninanan'ny kandidà mankany amin'ny Lapa Fotsy ny fifanakalozan-dresaka anaty aterineto tao Malawi.